बलात्कारको विरोधमा विद्यार्थीको प्रदर्शन, कहिलेसम्म योनीमा मृत्यु बोकेर हिँड्ने ? | Latest news of Nepal,world news, articles, literature, Business news, Entertainment and more बलात्कारको विरोधमा विद्यार्थीको प्रदर्शन, कहिलेसम्म योनीमा मृत्यु बोकेर हिँड्ने ?
बलात्कारको विरोधमा विद्यार्थीको प्रदर्शन, कहिलेसम्म योनीमा मृत्यु बोकेर हिँड्ने ?
फागुन १ गते, २०७७ - १५:४७
काठमाडौँ । बैतडीमा १७ वर्षीया किशोरी भागरथी भट्टको बलात्कारपछि हत्याको विरोधमा शनिबार पनि काठमाडौंमा प्रदर्शन गरिएको छ । पद्मकन्या क्याम्पसका विद्यार्थी बागबजारदेखि माइतीघरसम्म विरोध जुलुसमा सहभागी थिए ।
जुलुसमा उनीहरुले कालो पोसाक, निधारमा कालो पट्टीका साथै मुखमा पनि कालो टेप टाँसेका थिए । यसका साथै उनीहरु अनुहारमा र‌‍‌ग समेत पोतेर प्रस्तुत भएका थिए । उनीहरुले बोकेको पोस्टरमा ‘महिला कहिलेसम्म दोस्रो दर्जाको नागरिक ?’, ‘एम आई द नेक्स्ट ?’, ‘कहिलेसम्म योनीमा मृत्यु बोकेर हिँड्ने ?’ लगायतका विभिन्न नारा लेखिएका थिए ।
सोही बीचमा आँखामा कालो पट्टी लगाएर युवतीहरुले महिला सुरक्षा, अपराधीलाई कारवाही र पीडीतलाई न्याय दिन माग गरिरहेका थिए । उनीहरुले तिम्रा कानुन चाहिँदैन छोरी मार्न पाईदैन, हत्यारालाई सार्वजनिक गर, बलात्कारीलाई फाँसी दे जस्ता नाराबाजी गरेका थिए ।
फागुन १ गते, २०७७ - १५:४७ मा प्रकाशित